AbaThengisi beMask kunye neFektiki ye-N95 - abaTshini beMask eN95
I-150 mm Wet Polishing Pads A ...
I-4 ye-intshi yeekhonkrithi yomgangatho ...
Iplastikhi yeplastiki yelitye yePDR ...
FFP3 Ummameli weMask
Iinkcukacha: FFP1 / FFP2 / FFP3 Isisimamisi sokudubula Dk Mask NIOSH Ichaphaza I-N95 yobuso be-Mask Ngomnini wemveliso ye-Repirator N95 imask / ffp1 imaski / ffp2 imaski / ffp3 imaski Isixhobo esiphakamileyo soxinzelelo esingalukiyo ilaphu Umbala Grey, White, Blue Exhalation Valve Yes Type Type Ear Hanging Standards / Approvals Niosh, N95 Nqanaba lokhuseleko KN95 BFE> = 95% Ukupakisha ii-30 ii-pcs / ibhokisi, iibhokisi ezili-10 / ibhokisi. Ubungakanani beCaton: 66 * 29 * 30cm isicelo: 1 ...
Ixesha lokuKhokela: Ubungakanani (iiziqwengana) 1 - 300> 300 Est. Ixesha (iintsuku) ezili-10 Ukuxoxwa kweempawu: Iworkshop yeMveliso: I-FAQ: Q1: Ngaba unayo imaski yobuso kwisitokhwe? A: Uxolo, akukho maski esitokhweni ngoku.Umzi mveliso wethu ucwangcisiwe ukuveliswa kwemiyalelo yethu kubathengi bethu kwihlabathi liphela, iimaski zilungiselelwe ukuthunyelwa kubathengi abagunyazisiweyo. I-Q2: Ndingakwazi ukubeka i-mask yomyalelo wobuso ngoku? A: Ewe, unako.Umzi mveliso wethu ungomnye wabenzi abakhethiweyo ukunceda urhulumente ...
I-95 Masks yokuphendula
Ukuveliswa kwempahla yokhuseleko Ingubo yokhuseleko eqhelekileyo yokhuselo ihlala inomthi, ibhulukhwe kunye neebhulukhwe. Ngokwenza ukusika, ukuwa, ukuqina, itape yokucinezela yokucinezela kunye nobunye ubuchwephesha bokuvelisa, sinako ukuvelisa iimpahla ezifanelekileyo zokukhusela ezonyango. Kuyo yonke le nkqubo, umatshini obandakanyekayo ikakhulu ngumatshini wokuthunga kunye nomatshini wokucinezela weglue. Iimfuno ezisemgangathweni zeengubo ezikhuselayo zonyango Ukuphendula inani elikhulu labasebenzi bezonyango abosulelekileyo ...
I-N95 Mask iyahlanjwa
Ngawaphi amaqela kunye neendidi eziqhelekileyo zeengubo zokhuselo zonyango. Iingubo zokhuselo zonyango zidibanisa iminqwazi, iibhulukhwe nebhulukhwe. Zimbini iintlobo zokunxiba okhuselayo kwezonyango: ingubo yodwa kunye nempahla yokhuseleko. Umahluko ophambili phakathi kweengubo zokuzikhusela kwezonyango kunye nokunxiba izinto ezizodwa kukuba ukhuseleko lwezambatho luhlala ixesha elide kunesinxibo esisodwa, inqanaba lokhuselo liphezulu, ukusebenza kukhuselo kungcono, injongo yokhuselo kunye ne ...
Bantwana N95 Mask
Ixesha lokuKhokela: Ubungakanani (iiziqwengana) 1 - 300> 300 Est. Ixesha (iintsuku) ezili-10 Ukuxoxwa kweempawu: 1. Ukudluliselwa kwe-Droplet 2. Ukungcoliswa kuka-Anti 3. Ukuchasana nothuli 4. I-Anti Bacteria 5. Hluza i-PM2.5, intsholongwane, intsholongwane, intsholongwane kunye nezinto eziyingozi emoyeni, khusela impilo! Isicelo: 1. Isicelo: ukusetyenziswa kolwakhiwo, ukumbiwa kwemigodi, ilaphu, amayeza okugaya. 2. Izicelo: Ubomi bemihla ngemihla, indibano yokusebenzela, ii-SPA, izibhedlele, iikliniki, isikolo, iindawo zomsebenzi, njl. 3. uKhuseleko kwakhona ...
Iinkcukacha: FFP1 / FFP2 / FFP3 Isisimamisi sokudubula Dk Mask NIOSH Ichaphaza I-N95 yobuso be-Mask Ngomnini wemveliso ye-Repirator N95 imask / ffp1 imaski / ffp2 imaski / ffp3 imaski Isixhobo esiphakamileyo soxinzelelo esingalukiyo ilaphu Umbala Grey, White, Blue Exhalation Valve Yes Type Type Ear Hanging Standards / Approvals Niosh, N95 Nqanaba lokhuseleko KN95 BFE> = 95% Ukupakisha ii-30 ii-pcs / ibhokisi, iibhokisi ezili-10 / ibhokisi. Ubungakanani bebhokisi: 6 ...
Ixesha lokuKhokela: Ubungakanani (iiziqwengana) 1 - 300> 300 Est. Ixesha (iintsuku) 10 Ukuxoxwa kweempawu: 1. Ukudluliselwa kwethontsi kwamachaphaza 2. Ungcoliseko lwakwa-Anti 3. Ukuchasana nothuli 4. Isicelo seBacteria: 1. Isicelo: sokwakha, ukumbiwa kwemigodi, ilaphu, amayeza okugaya. 2. Izicelo: Ubomi bemihla ngemihla, indawo yokusebenzela, ii-SPA, izibhedlele, iikliniki, isikolo, iindawo zomsebenzi, njl. A: pp nonwoven, iyasebenza ...
Ixesha lokuKhokela: Ubungakanani (iiziqwengana) 1 - 300> 300 Est. Ixesha (iintsuku) 10 Ukuxoxwa kweempawu: 1. Ubungakanani bokucocwa kweempawu: ≥98% 2. Umgangatho wokucocwa kwamasuntswana: ≥98% 3. Ukuxhathisa ukuqunjelwa sisifo (MM H2O CM2): <5.0 4. Ukungangeni kwegazi: 60 mmHG 5. Ukubuyiswa komlilo: I-CL ASS 1 6. Imigangatho: I-ASTM 7. Isiqinisekiso: I-FDA IMBUZO: 1. Ithini inzuzo yenkampani yakho? (1) Umgangatho we-Btter ngexabiso eliphantsi Sihlala sinikezela ngexabiso elingcono kwinqanaba elifanayo lomgangatho, kwaye zama ...